Otu esi etinye isi igwe ịsa ahụ - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Otu esi etinye isi mmiri ịsa ahụ
Otu esi echekwa isi ịsa ahụ kwa ụbọchị
1. Mgbe a na-eji mmiri ịsa ahụ eme ihe, ọ dị mkpa iji hụ na okpomọkụ dị n'okpuru ogo 70. Ma ọ bụghị ya, okpomọkụ dị elu nwere ike ime ka ịka nká nke mmiri ịsa ahụ dịkwuo elu, nke nwekwara ike belata ndụ ọrụ. Ọzọkwa, ọnọdụ nke nrụnye nozzle kwesịrị ịdabere n'ụkpụrụ nke isi iyi ọkụ eletrik, ma ọ ka nwere ike ịwụnye ya ozugbo n'okpuru Yuba. Ekwesịrị ịchịkwa ebe dị n'etiti abụọ ahụ na ihe dịka 60cm.
2. Enwere ike ịsị isi ịsa ahụ na-eji dị ka eriri igwe. Enwere ike ịsị na ndị a na-ejikwa ọnọdụ agbatị eke mgbe niile. Enwere ike ịsị na mgbe ị na-eji ya, ọ dị mkpa ka a kpochie ya na ọkpọkọ. Ekwesiri iburu n'uche ebe a na enwere nkwonkwo n'etiti eriri na eriri. Nke a agaghị emepụta njedebe nwụrụ anwụ, ma ọ bụ ọ nwere ike ime ka eriri ahụ kwụsị, na ụfọdụ mmebi nwere ike ime n'oge a.
3. Mgbe a na-eji isi mmiri eme ihe ihe karịrị ọkara afọ, na nke a, a ghaghị ịkwasa isi mmiri ịsa ahụ, ma n'otu oge ahụ, a ga-etinye ya na efere. N'otu oge ahụ, a ga-agbakwunye mmanya na-acha ọcha na-eri nri na nke a Ọ bụrụ na a na-agbanye elu n'ime ya, mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, ị ga-eji akwa owu na-ehichapụ ebe mmiri dị n'isi ịsa ahụ, wee kpochaa ya na ya. mmanya ọcha a.
Nchịkọta: Nke a bụ mmalite gbasara otu esi etinye isi mmiri ịsa ahụ. Enwere ike ime echichi dịka ụzọ ndị dị n'elu si dị. Mgbe ahụ, a na-akwụkwa ụfọdụ nkọwa nke nrụnye nlebara anya pụrụ iche iji zere nsogbu ndị na-enweghị isi.
Nke gara aga:Otu esi ehichaa isi ịsa ahụ? Ndụmọdụ nlekọta maka nozzles ịsa ahụ?
Osote:Otu esi agbagide isi mmiri ịsa ahụ